I-Swiss Chalet Abegglen, Grindelwald
Grindelwald, Bern, i-Switzerland
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Luanne
U-Luanne Ungumbungazi ovelele
I-Chalet Abegglen iyi-Swiss Chalet yendabuko, ebekwe endaweni yayo enokubukwa okuhle kwezintaba ezizungeze isigodi saseGrindelwald.
Ifulethi eliphansi linikeza izivakashi isisekelo esihle, esisebenzayo samaholide asebenzayo unyaka wonke.
I-Kreuzweg ngokuvamile iwumgwaqo owumqansa futhi omncane, osezintabeni. Izivakashi kufanele zilindele ukuhamba ngezinyawo ukuya nokubuya edolobheni (cishe amaminithi angu-10) ngezinyawo. Kukhona indawo yokupaka e-Chalet futhi imizila yamabhasi inikeza enye indlela yokufinyelela endlini.
Ilula, iyasebenza futhi ngesitayela sendabuko. Igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokuhlala libanzi, kanti igumbi lesibili negumbi lokugezela kuhlangene. Ikhishi/indawo yokudlela inendawo encane yokusebenzela kanye netafula lokudlela elihlala abantu abangafika kwabangu-4. Ifulethi lihlome ngokuphelele ngokwezindinganiso zendawo. Isisekelo esihle semisebenzi yasendaweni.
I-Chalet Abegglen itholakala kumgwaqo owumqansa wase-Kreuzweg e-Grindelwald, iyi-chalet yokugcina e-Kreuzweg ngaphambi kokufika e-Terrassenweg. Isendaweni ethule futhi enganakiwe amanye amaChalets aseduze. Isikhungo sedolobha singafinyelelwa ngemizuzu eyi-10. Iseduze kakhulu nendawo ye-Bodmi ski, ilungele imindeni enezingane ezincane, noma abafundi bokuqala
Sihlose ukunikela ngokungena ngaphandle kokuthinta Sitholakala ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb (08:00 - 18.00) ukuze uthole ulwazi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Grindelwald namaphethelo